မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် App Download 2020 - Free - 9Apps
5.5.5 for Android
4.4 | 1,000,000+ Installs | Reviews
Download APK（21.9MB） Previous Versions
Description of မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် - Min Thein Kha Baydin
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ပါဝင်သော ဗေဒင်ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဗေဒင်ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် နှစ်အလိုက် ဟောစာတမ်း၊ အပတ်စဉ်ဟောစာတမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဟောစာတမ်းတစ်ခုချင်းစီတွင် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ နှင့် ပြုလုပ်ရန် ယတြာများ ပါဝင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် App ဖြင့် မိမိကံကြမ္မာကိုသာမက မိမိ၏ မိသားစုဝင် ၊ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေများအတွက်လဲ မေးမြန်းနိုင်ပြီး Facebook မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် Share ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application ၏ အမည်သုံးစွဲခွင့်၊ ပုံသုံးစွဲခွင့်၊ ဟောစာတမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များရယူလုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
A look at the growing popularity of astrology in Myanmar
A Future Life - ShweZayTi Vicara Monastery - Yangon Myanmar.
San Zarni Bo | Myanmar's preeminent fortune teller | Coconuts TV
min lay chit
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် - Min Thein Kha Baydin 5.5.0
Min Thein Kha 5.4.9
Min Thein Kha 5.4.8
Citizen Calculator & GST Calculator-Loan Emi Calc
Aung Ko Ko Minn
I got knowledge about "Myanmar Bay Din''. I don't have to go to Bay Din Sayar.So, I don't have to use money.I feel pretty convenient.I can save both "Time & Money''. U know ?"Time is money'' . So, i highly recommend ya to use this app.
good app ဒေါင်းလိုက်ပါကောင်းပါတယ်
Their fortune telling service is good 100% fully true
No money no results,😂
Myo Minn Lat Flw
Good use app.That's right.
Android Q not supported yet??